मोबाइल खर्च मासिक पाँच सय
७७ जिल्ला र ६ महानगरको नेकपा नेतृत्व क-कसले पाए ?
विधेयकको नाममै असन्तुष्टि
प्रदेश १ मा पूर्वएमालेलाई ९ र पूर्वमाओवादीलाई ५ जिल्ला
ज्येष्ठ नागरिकको जिम्मवारी सरकारले लिनु पर्छ : आयोग
नेपालीले मोबाइल फोनका लागि औसत मासिक चार सय ९१ रुपैयाँ खर्च गर्ने पाइएको छ। लर्न एसिया, इन्टरनेट सोसाइटी अफ नेपाल र सेन्टर फर ल एन्ड टेक्नोलोजीको अध्ययन प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो। प्रतिवेदनअनुसार नेपालीले मोबाइल फोनमा मात्र वार्षिक एक खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्छन्।
नेपालमा मोबाइको पहुँचबारे गरिएको अध्ययनले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो। नेपालमा कुल जनसंख्याको ७२ प्रतिशतले मोबाइल फोन प्रयोग गर्ने अध्ययनले देखाएको छ। कुल जनसंख्याको ७२ प्रतिशत भन्नाले दुई करोड १० लाख २५ हजार हुन आउँछ। दुई करोड १० लाख २५ हजारलाई मासिक चार सय ९१ रुपैयाँका दरले हिसाब गर्दा नेपालीको मोबाइलमा वार्षिक खर्च एक खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ हुन्छ। अध्ययनअनुसार नेपालमा १५ देखि ६५ वर्ष उमेर समूहका ७२ प्रतिशत मानिस मोबाइल प्रयोग गर्छन्। अध्ययनले नेपालको ग्रामीण र सहरी क्षेत्रबीच मोबाइल प्रयोग गर्नेको फरक १५ प्रतिशत देखाएको छ।
राजधानीमा बिहीबार नेपालसहित १८ देशमा गरिएको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै लर्न एसियाकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हेलानी गालपायाले नेपालीमध्ये ५२ प्रतिशतले स्मार्टफोन र ४० प्रतिशतले साधारण मोबाइल फोन प्रयोग गर्ने बताइन्। ‘अध्ययनमा ४० प्रतिशतले साधारण फोन प्रयोग गर्ने र त्यसमा इन्टरनेटको पहुँच नभएको पाइएको छ, जुन विशेषगरी वृद्धवृद्धाले वा इन्टरनेटबारे थाहा नहुनेले बोकेको देखिन्छ’, गालपायाले भनिन्। प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा मोबाइल प्रयोगका आधारमा लैंगिक असमानता एसियामा नै कम छ।
सेन्टर फर ल एन्ड टेक्नोलोजीका अध्यक्ष बाबुराम अर्यालका अनुसार नेपालमा महिला र पुरुषबीच मोबाइल फोन प्रयोगको भिन्नता १९ प्रतिशत मात्र छ। उनका अनुसार नेपालमा मोबाइल फोन बोक्नेमध्ये ६० प्रतिशत मानिससँग आम्दानीको कुनै स्रोत नै छैन। उनीहरूले अन्य कसैले उपहारमा दिएको वा किनिदिएको मोबाइल प्रयोग गर्ने अध्ययनले देखाएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार नेपालीले मोबाइल फोनमा मात्र वार्षिक एक खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्छन्।
प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा ४६ प्रतिशत मानिसलाई मात्र इन्टरनेटबारे जानकारी छ। युवा समूहमा भने इन्टरनेटबारे अन्य मुलुकको तुलनामा निकै बढी चेतना छ। यस्तै पुरुषको तुलनामा ३३ प्रतिशत महिलाले मात्र इन्टरनेट प्रयोग गरेका छन्। नेपालमा इन्टरनेट प्रयोग गर्नेमध्ये ७७ प्रतिशतले विभिन्न सामाजिक एप्लिकेसन प्रयोग गर्ने देखिएको छ। एपमध्ये नेपाली सबैभन्दा बढी फेसबुक चलाउँछन्। दोस्रोमा म्यासेजिङ तथा च्याटिङ एप छ। यस्तै तेस्रो नम्बरमा भाइबर, ह्वाट्सएप जस्ता भीओआईपी एप रहेको अध्ययनले देखाएको छ।
इन्टरनेटमा पहुँच भएकामध्ये १२ प्रतिशत नेपालीले सार्वजनिक निःशुल्क वाइफाइ प्रयोग गर्दछन् भने १६ प्रतिशतले शुल्क तिरेर वाइफाइ प्रयोग गर्छन्। नेपालमा कुल ४६ प्रतिशतले मात्र वाइफाइ प्रयोग गर्ने गरेको तथ्यांक छ। उक्त अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार मोबाइल फोन प्रयोग गर्ने साथै इन्टरनेटमा पहुँच भएका मध्ये ५९ प्रतिशत नेपालीले सामाजिक सञ्जालमा आएका समाचारमा विश्वास गर्ने गरेका छन्। ४२ प्रतिशतले सामाजिक सञ्जालका समाचार सेयर गर्ने गरेको र ४८ प्रतिशत नेपालीले सामाजिक सञ्जालको समाचार सेयर गर्नु अगाडि विचार गर्ने गरेका प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
संस्थाका अनुसार यो अध्ययका लागि नेपालका विभिन्न सहर तथा ग्रामीण भेगमा दुई हजारभन्दा बढी मानिससँग कुराकानी तथा प्रश्नोत्तर गरिएको थियो। उसले भारत, पाकिस्तान, बंगलादेशसहित विभिन्न १८ देशमा यस्तै सर्वेक्षण गरेको छ।
फास्ट ट्रयाकमा विश्व बैंकको ऋण
काठमाडौंमा तहगत पार्किङ
धुलिखेल–पोखरा पर्यटक बस सञ्चालन हुने
लामाबगर भन्सार : आम्दानी शून्य, खर्च ५ करोड
समृद्धिका लागि संविधान कार्यान्वयन
नारायणगढ–मुग्लिन सडक दुईतर्फी खुल्यो
विमान खरिदमा ‘किर्ते’ कारोबार
निराशामा टुंगिएको वर्ष
खाद्यान्नको मूल्य नियन्त्रण नीति आवश्यक
कसरी बन्छन् बेस्ट सेलर?
म्यानपावर व्यवसायी बलबहादुर तामाङविरुद्ध १९ करोडको करछली मुद्दा
बजेट अधिवेशन लम्बिने
फोहर व्यवस्थापनको २८ अर्ब फिर्ता हुँदै
गाउँमा गाडी पुग्दा तरकारी उत्पादन बढ्यो
साउने व्रत र धार्मिक पर्यट...
हरियाली महिना साउन । त्यसमाथि धार्मि�
कृष्ण कट्टेल, निराजन पौडेल प्रस्तावि�
अर्थ /वाणिज्य (1,175)